La နို့တိုက်ကျွေးရေး တိရစ္ဆာန်များ၏ကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်ခြင်းနှင့်ကျန်းမာရေးပြproblemsနာများမရှိခြင်းတို့သည်မြင်းများ၏အခြေခံဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်မည်သည့်အစားအစာအမျိုးအစားကိုသိသင့်သည် ကျနော်တို့မြင်းနှင့်ပတ်သက်။ ဝယ်သို့မဟုတ်အကောင့်သို့ယူနိုင်ပါတယ်။
အမျိုးအစားများ အစားအစာနှင့်လည်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ငါတို့တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ၄ င်းတို့သည်တိရိစ္ဆာန်ဆရာ ၀ န်များ၏သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အာဟာရဆိုင်ရာပြproblemsနာများရှိနိုင်သည်ကိုမမေ့နိုင်ပါ။ အကောင်းဆုံးအမှတ်တံဆိပ်များနှင့် အစာကျွေးဖို့အကောင်းဆုံးပါဝင်ပစ္စည်းများ မြင်းများအကောင်းဆုံးလမ်းအတွက်။
por ဂျဲနီရေတွင်း လွန်ခဲ့တဲ့3အနှစ် .
ဒီနေ့ဆောင်းပါးမှာ nag ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုပြောသွားမှာပါ။ ဆောင်းပါးအတော်များများတစ်လျှောက်မှာကျွန်တော်တို့ဟာရှင်းပြနေတယ်။
မြင်း oats, သူတို့ရဲ့အစားအစာအတွက်ရိုးရာပါဝင်ပစ္စည်းများ
ကျွန်ုပ်တို့၏မြင်းများကိုကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအမြဲစိုးရိမ်ပူပန်စေသောအရာဖြစ်သည်။ ဘယ်အချိုးအစားနဲ့ပေးသင့်သလဲ။ ဓာတ်သတ္တုများလက်ခံရရှိပါသလား ...
por မော်နီကာဆန် လွန်ခဲ့တဲ့5အနှစ် .
ဒီမြင်းတွေကစားလား သင်သည်မြင်းတစ်ကောင်ကိုဝယ်ယူပြီးသို့မဟုတ်မွေးစားလိုက်ပြီဆိုလျှင်ထာဝရကျန်းမာစေလိုပါသလား။ ရင်တောင်မှ…
por ရို Sanchez လွန်ခဲ့တဲ့6အနှစ် .
မြင်းတွင်အစားအစာတွင်အစာပါဝင်သည်။ အထူးသဖြင့်ယှဉ်ပြိုင်မှု၌နေသောမြင်း။ ဒါကပို ...
အစားအစာကိုယ်နှိုက်သည်မြင်းရှိ colic ကို ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲစားသုံးခြင်းနှင့် ...
ကွဲပြားခြားနားသောစည်းကမ်းချက်များ၌ယှဉ်ပြိုင်မယ့်တက်ကြွသောမြင်း၏နို့တိုက်ကျွေးရေးတစ် ဦး ကဲ့သို့တူညီသောအစားအစာကိုလိုက်နာလို့မရပါဘူး ...
မြင်းသည်အထူးသဖြင့်ယခုအချိန်တွင်ပင်စိတ်ဖိစီးမှုအလွန်ခံနိုင်ရည်ရှိသော ဦး နှောက်အာရုံကြောတိရိစ္ဆာန်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Equine အာဟာရ - အမျှင်ဓာတ်
por Angela Graña လွန်ခဲ့တဲ့ 8 အနှစ် .
မြင်းအတွက် colic ၏အကြောင်းရင်းများ
por ပန်းချီဆရာ လွန်ခဲ့တဲ့ 10 အနှစ် .
por ပန်းချီဆရာ လွန်ခဲ့တဲ့ 11 အနှစ် .